सन्जिब पराजुली र कमल खत्रीको ‘सात सुरमा’ – Fewa Times
ज्वरो आएर अस्पतालमा मृ*त्यु भएकी युवतीको स्वाब परीक्षण गरिने (भिडियो)-आइसोलेसनमा मृ*त्यु भएका व्यक्तिको ४ दिनसम्म शब उठेन-आज राती हावाहुरीसहित पानी पर्ने-२५ गतेसम्म लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णय, लकडाउन अझै कडा हुने-धनगढीमा दुबईबाट आएका व्यक्तिलाई कोरोना (भिडियो)-चीनमा फेरि हान्ता भाइरसको महामारी, एक जनाको मृ*त्यु-काठमाडौँमा १९ वर्षिया युवतीलाई कोरोनाभएको पुष्टि-आजबाट सरकारले यी ठाउँमा नुन, तेल, चामल र ग्यास बेच्ने-साथीलाई कोरोना लाग्यो भन्दै झुटो स्टाटस लेख्ने बिरगञ्जकी युवतीलाई यस्तो कडा सजाय-काभ्रेको पनौतीमा अनिश्चितकालीन कफ्र्यु
सन्जिब पराजुली र कमल खत्रीको ‘सात सुरमा’
प्रकाशित मिति: March 19, 2020 4:28 pm
काठमाडौं – गायक सन्जिब पराजुली र कमल खत्रीको स्वरमा रहेको ‘सात सुरमा’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतमा कमलकै शब्द र संगीत छ । दी भ्वाइस अफ नेपालको स्टुडियोमा छायांकन गरिएको भिडियो निकै आकर्षक देखिन्छ ।
सेमी क्लासिकल फ्लेभरको गीतको भिडियोमा गायकद्वय कमल र सन्जिब फिचर्ड छन् । भिडियोमा वाद्यवादनका सदस्यहरु कृपेश ढकाल, एलेक्स डी प्रसन्न, अदित मगर, विक्रम थापा, रिकेश गुरुङ र कृष्ण सापकोटा पनि देख्न सकिन्छ ।
गीतमा गुरु चन्दन श्रेष्ठको तरना रहेको गीतमा रिकेश गुरुङको एरेन्ज छ । लक्ष्मण पौडेलको निर्देशन रहेको भिडियोमा अर्जुन तिवारी र उनको समूहको छायांकन छ । भिडियोमा सोहन मानन्धरको कलर करेक्सन र सम्पादन छ । भिडियोलाई गायक सन्जिब पराजुलीको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको हो ।
आज बर्षा सिवाकोटीको जन्मदिन, कति बर्ष लागिन् बर्षा ?
दयालु पुजाले गरिन् प्राविधिकलाई यत्ति ठुलो रकम सहयोग (भिडियो)
अनु र बिम्बको “आकाँक्षा”
युट्युबमा हेर्नुहोस् चलचित्र हिरो नं. १
स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा जोडिएको आरोप लागेका युवराज शर्माले खोले मुख
काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्यमा संलग्न......
विदेशबाट आएका देवरलाई कोरोना, भाउजुलाई पनि लाग्यो, एकैदिन ३ जनामा पोजेटिभ देखियो (भिडियो)
चैत्र २२, काठमाडौं – कैलाली र कञ्चनपुरमा भेटिएका तीन नयाँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको उपचार सेती प्रादेशिक......